merolagani - जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश प्रस्तावमा किन ढिलाई ?
जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश प्रस्तावमा किन ढिलाई ?
Jun 09, 2021 01:23 PM Merolagani
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न थाले पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको लाभांश भने अझै आउने छाँटकाँट देखिएको छैन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एनएफआरएस प्रणाली अनुसार समयमै वित्तीय विवरण तयार पार्न पार्न नसक्दा लाभांश आउन ढिलाई भैरहेको छ ।
परम्परागत विधिबाट वित्तीय विवरण तयार पार्दै आइरहेका जीवन कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनिवार्य रूपमा एनएफआरएस प्रणाली लागू गर्दै सोही अनुरूप वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
अधिकाँस निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेर साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुअरीको अभावममा वित्तीय विवरण समेत तयार पार्न नसकेका हुन् ।
तर प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराई भने एनएफआरएसकाे कारणले साधारण सभा बोलाउन ढिलाई भएको अस्वीकार गर्छन् । उनले एनएफआरएसको कारणले नभएर लाइफ फण्डको एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्नुपर्दा साधारण सभा बोलाउन ढिलाई भएको बताए ।
‘जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा थप व्यवस्था भएपछि वित्तीय विरण तयार पारेर साधारण सभा बोलाउन केही ढिलो भैरहरको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार लाइफ फण्डको भ्यालुयसन लगायतको केहि प्रावधानले गर्दा वित्तीय विवरण तयार पार्न केहि ढिलो भएको हो ।’ उनले भने ।
यस्तै उनले एनएफआरएस प्रणालीमा वित्तीय विवरण तयार पार्न पनि कठिनाइ नभएको बताए । ‘विगत चार वर्ष देखि हामीले एनएफआर प्रणालीको वित्तीय विवरण तयार पारिरहेका छाैं । त्यस्तो केहि कठिलाई छैन् । पहिला बीमा समितिको निर्देशन अनुसार दुई थरीको वित्तीय विवरण तयार पार्दै आइरहेका थियौं । अहिले एनएफआरएस प्रणालीको मात्रै बनाईरहेका छौं । तस्तो अप्ठोरो केहि छैन् ।’ सबै काम अनलाईनबाट हुने भएकोले वित्तीय विवरण तयार पार्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई छ ।
जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को केहि प्रावधानहरुमा बीमा समितिले पनि केहि सहजीकरण गरेको जानकारी गराउदै उनले आगामी दिनहरुमा समयमै वित्तीय विवरण तयार हुने बताए ।
बीमा कम्पनीहरूले तयार पारेकाे वित्तीय विवरण बीमा समितिबाट स्वीकृत भएपछि कम्पनी सञ्चालक समितिकाे बैठनले उक्त वर्षकाे लाभांश प्रस्ताव गर्नेछ ।